Baroordiiq 3 maalmood ah oo ka socota dalka Itoobiya iyo calanka dalkaas oo hoos loo dhigay. – Xeernews24
Baroordiiq 3 maalmood ah oo ka socota dalka Itoobiya iyo calanka dalkaas oo hoos loo dhigay.
11. März 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Dowlada Itoobiya ayaa ku dhawaaqday baroordiiq 3 maalmood ah oo loo sameynayo dadkii faraha badnaa ee ku geeriyooday shilkii dayuuradeed ee shalay ka dhacay duleedka magaalada Addis ababa ee xarunta dalka Itoobiya.
Waxaa sidoo kale hoos loo dhigay calanka wadankaas, si loo maamuuso 157 qof oo isugu jiray rakaab iyo shaqaale la socday dayuurad nooceedu ahaa Boeing 737 oo shalay burburtay, daqiiqado yar ka dib markii ay ka kacday garoonka dayuuradaha Bole, kuwaasoo kala jeeday illaa 37 dal.
Dhinaca kale, Shirkadda samaysa diyaaradda Boeing ee dalka Maraykanka ayaa wajahaysa su’aalo badan oo la xidhiidha heerka badqabka diyaaradda nooceedu yahay 737 kadib shilkii diyaaradeed ee ka dhacay Itoobiya, kaas oo ay ku dhinteen 157-dii qof ee saarnayd.
Waa shilkii labaad muddo 6 bilood gudahood oo ay diyaaradan galayso, kii kan ka horeeyay waxa uu ka dhacay dalka Indonosia bishii Oktoobar ee sannadkii hore, wax yar uu ka dib markii ay cagaha dhulka ka qaadday.
Tii shalay dhacday waxa ay ka mid ahayd 6 diyaaradood oo shirkadda Ethiopian Airlines ka iibsatay shirkadda Boeing, balse dalabka waxa uu ahaa 30 xabbo, iyadoo kuwii kale aanan weli lasoo gaadhsiin shirkadda.
Kadib shilkii dhacay bishii Oktoobar, baadhayaasha waxa ay sheegeen in duuliyahu uu ku rafaaday sidii uu u xakamayn lahaa habka kaligiis is haga ee diyaaradda ay ku shaqayso, kaasoo shukaanta diyaaradda mararka qaar kala wareegi kara duuliyaha.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/03/calan.jpg 1080 1000 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-03-11 08:51:292019-03-11 08:51:29Baroordiiq 3 maalmood ah oo ka socota dalka Itoobiya iyo calanka dalkaas oo hoos loo dhigay.
ku dhawaad tiro 30 qof ah ayaa ku dhaawacantay khal-khal ku yimid dayuurada... Inkastoo Ay Raadinayeen Haddana Mullah Cumar Wuxuu Sannado Badan Ku Noolaa Saldhigooda...